Akhriso:Taariikhda Marxuum Abwaan Sangub – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Akhriso:Taariikhda Marxuum Abwaan Sangub
Akhriso:Taariikhda Marxuum Abwaan Sangub
Abwaan Maxamuud C/llaahi Ciise (Sangub) ayaa Saakay ku geeriyooday Isbitaal ku yaalla Magaalada Addis Ababa ee Caasimada Dalka Itoobiya.
AUN Abwaanka Maxamuud Cabdilaahi Ciise (Sangub), wuxuu ka mid ahaa Abwaanada ugu horeeya hal-abuurka Soomaalida, waana nin dad badani ku xusuustaan kaalinta uu ka soo qaatay kobcinta Fanka Soomaalida, taariikh-faneedka Sangub: Maxamuud Cabdillaahi Ciise (Sangub), wuxuu ku dhashay baadiyaha magaalada dhagaxbuur dhulka Is-maamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya, sannadkii 1944, halkaas oo uu ku barbaaray. Sangub markii da’diisu shan jir gaartay ayuu ku bilaabmay u hilowga fanka.
Dhalinyaranimadiisii, wuxuu ku soo caan baxay ciyaaraha dhaqanka, gaar ahaan ciyaarta “Dhaantada” oo ah mid markuu gacanta u qaado aan cidina uga daba dabadii yeerin. Kasokow dhinaca Ciyaaraha dhaqanka Sangub, wuxuu ahaa gabayaa ka hida qaba qoysas kala duwan wada gabya, aabihii, abtiyaashii iyo walaalihii intuba way gabyi jireen. Wakhtigiii hore ma jirin waxbarasho Jaamacadeed, iskuuladuna dalka way ku yaraayeen, sidaa darteed sangub wuxuu ku dadaalay inuu barto Quraanka Kariimka.
Abwaan Sangub, markii uu barbaar noqday ayuu yimid magaalada Hargeysa, sannadkii 1961, wuxuuna tegay Idaacadda Raadiyow Hargeysa, Ka dib markii uu ka helay shaqo-aan-rasmi ahayn magaalada hargaysa ayuu waxa uu u wareegay magaalada Muqdisho sannadkii 1961, halkaas oo uu imtixaan u u galay, isaga iyo 21 qof oo kale , sidaas ayuuna kaga shaqo galay Idaacada Muqdisho.
Abwaanku, wuxuu noqday mid halis ku ah samaynta Riwaayadaha xiisaha leh, Guud ahaan, riwaayadihiisu,Abwaan AUN 1964-kii, ayuu sameeyay riwaayad la odhan jiray; “Lamood noqonse wayday.” Abwaan Sangub, halkaa kama harin abuurista riwaayadaha, wuxuuna xoojiyay mu’alifnimadiisii, sannadkii 1966, wuxuu sameeyay riwaayada caanka ah ee “Yaxaas dhega-duub.” Abwaan Sangub, mar la waydiiyay cidii ku dhiiri-gelisay samaynta riwaayadaha, wuxuu yidhi;
“Mu’alifiinta, qaarbaa bakhaylo ah oo aan sheegin cidii soo gacan qabatay, aniguse sidaa ma ihi oo waan sheegayaa, waayo, cidina kuma soo dhalan,” ayuu yidhi. “Riwaayadaha, waxaa igu dhiiri-geliyay Cismaan Aadan (Cismaan Askari) oo isagu aan iga harin ilaa aan ka sameeyay riwaayadihii; “lamood noqonse wayday iyo Naga Guur.” Iyo kuwa kale oo badan, Allaha u naxariisto Abwaan Sanugub.
Previous articleNabaddoon xalay lagu dilay Kismaayo
Next articleMuranka Badda Ee Somalia Iyo Kenya Oo UN-Ka Gaadhay
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland oo Daahfuray Shirka Qaran ee ka Faa’iideysaiga...